Koeman oo ammaan kala dul dhacay Coutinho, Muxuuse ka yiri barbardhicii ay la galeen Seville?? – Gool FM
(Barcelona) 05 Okt 2020. Tababaraha kooxda Barcelona ee Ronald Koeman ​​ayaa muujiyay sida uu ugu faraxsan yahay horumarka ay kooxdiisu ka muujisay kulamada horyaalka Spain xilli ciyaareedkan, inkastoo ay xalay barbardhac la galeen naadiga Seville.
Kooxaha Barcelona iyo Sevilla ayaa dhibcaha ku qeybsaday garoonka Camp Nou, kaddib markii ay ku kala baxeen barbardhac 1-1 ah, kulan ka tirsanaa horyaalka La Liga ee dalka Spain.
Ciyaarta kaddib Tababaraha kooxda Barcelona ee Ronald Koeman ​​ayaa u sheegay warbaahinta:
“Ma aanan ku jirin heerkeena kubadda cagta, waxaan khasaarinay kubaddo badan qeybtii hore, laakiin waxaan abuurnay fursado waanan ku faraxsanahay taas”.
“Kaddib kulamada caalamiga ah, waxaa jiri doono barnaamij isku duuban oo ciyaaro ah, laakiin waan ku faraxsanahay kooxda sidaas darteed waxaan u arkaa inaan horumar sameyneyno, wax badan”.
“Natiijada ilaa iyo haatan waa mid wanaagsan, waxaan ciyaarnay seddex kulan oo adag, waxaana badinay labo ka mid ah, shaqo badan ayaa ina sugeysa, daqiiqadihii ugu dambeeyay ee ciyaarta waxaan isku daynay waxbadan waxaana helnay fursado aan kuheli karnay goolal iyo xalinta ciyaarta”.
Intaas kaddib Ronald Koeman ayaa ka hadlay xiddiga reer Brazil ee Philippe Coutinho:
“Ciyaaryahan kasta wuxuu u baahan yahay caawinta tababaraha Coutinho wuxuu ku kalsoon yahay naftiisa, waxa uu cadeeyay inuu yahay ciyaaryahan weyn, waana ku faraxsanahay inaan haysto” ayuu yiri Ronald Koeman.
Xiddiga Arsenal ee Matteo Guendouzi oo tijaabada caafimaad u maray Kooxda...